Akwụkwọ mkpuchi eji ebu ibu-News-Phu Ly Bao Co. Ltd
Ị nọ ebe a : >lọ>News
Ntuziaka mkpuchi nke akwa mkpuchi
Ndị a bụ iberibe iberibe maka ndị na-achọ obere akpa nwere ụkwụ ga na-ebu ụgbọelu. Otutu totes nwere ụkwụ ga-adakọ n'okpuru oche ahụ, ma pere mpe ma ọ ga-adị mfe iji bulie ma na-ebugharị ebe a na-edebe nchekwa. Mkpịsị ụkwụ wheeled nwere ike inwe otu mgbanwe akwa, akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ na obere obere ihe ndị ọzọ ị ga-achọ iburu gị n'ụgbọ elu.
18 ″ - 20 ″ Na-ebu Ibu
A na-ahụta ihe ndị a ka ha buru ibu nke mba dị iche iche, dịka a na-ahapụ ha ka eburu maka ọtụtụ ụgbọ elu mba. Ha dị mma maka njem nke 1-2 ụbọchị, ebe ha nwere oghere maka obere uwe, otu akpụkpọ ụkwụ, na ụlọ mposi.
21 ″ - 22 ″ Ibu Ebu
Ndị a bụ akpa mkpuchi kachasị ewu ewu maka ụgbọ elu US. Imirikiti ụgbọ elu US nwere ikike nke 22 ″ x 14 ″ x 9 ″, ma ọ bụ sentimita iri anọ na anọ. Ndị a bụ ogo dị mma maka ndị njem azụmaahịa ma ọ bụ njem izu ụka, n'ihi na ọtụtụ iberibe nha ndị a nwere uwe mkpuchi ma ọ bụ uwe mwepụ nke nwere ike ijide otu uwe ma ọ bụ akwa ma nwee oghere zuru oke maka uwe mpekere ole na ole, otu ụzọ abụọ di na nwunye akpụkpọ ụkwụ, yana ụlọ mposi. Imirikiti nwekwara ụdị mgbasawanye, nke na-enye ohere inwetara abụọ karịa 45 na 2 nke ike mbukota, mana mgbe agbatịkwu nha ndị a nwere ike ịgafe mmachi na a ga-enyocha ya.
23 ″ - 24 ″ Obere akpa enyochaala
A nha ndị a na-ewu ewu maka ndị njem na-achọ obere nhọrọ dị mfe nke mkpuchi mkpuchi iji lelee. Iberibe ndị a buru oke ibu na-ebu ụgbọelu, mana ha zuru oke maka njem ụbọchị atọ ruo ụbọchị ise. Enwere oghere maka akwa 3 - 5, otu akpụkpọ ụkwụ di na nwunye, na ngwa mposi. Uwe suap (nke na-apụta ma ọ bụ wewe uwe elu) nwere oghere ruo 2 suut ma ọ bụ akwa.
25 ″ - 27 L Ejiri akpa
Sizesdị ndị a bụ akpa mkpuchi kachasị ewu ewu iji lelee. Ha dị mma maka njem ụbọchị ise ruo ụbọchị asaa, ma ọ bụ karịa, dabere na otu esi ebu. Ha nwere nnukwu ikike maka otutu uwe, akpụkpọ ụkwụ, na ụlọ mposi. Uwe a na-adọka adọtị (akwa mpụta ma ọ bụ wepu uwe elu) nwere ike ijide akwa akwa abụọ ma ọ bụ ruo uwe anọ. Ndị a bụ nhọrọ kachasị mma maka mkpuchi iji lelee, ha nwere ọtụtụ ohere ịkwakọ ma ị gaghị emebi azụ gị na-achọ ịkwaga ya.
28 ″ - 32 ″ Suitcase
Ndị a bụ akpa akwa buru ibu maka emere njem gafere izu. Ha nwere ikike dị ukwuu maka ihe ọ bụla ịchọrọ ịga. N'ihi nnukwu nha ha, mgbe ejiri ngwakọta zuru ezu, ha nwere ike isi ike ịgagharị ma nwee ike karịa 50 lbs. mgbochi mgbochi nke ọtụtụ ndị ụgbọ elu US na-amanye. Tinyere ihe mgbochi dị arọ, ọtụtụ ụgbọ elu US nwere nha nha nke nha 62 and na nha ndị a nwere ike karịa ogo ahụ, ọkachasị mgbe agbatịkwu ya. Mana ọ bụrụ na ịmara na ịchọrọ akpa mkpuchi kachasị dịnụ, ndị a ga-adịrị gị.
Na Mbụ nloghachi Osote
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) Adreesị Bekee: 71 - 73 Street Nke 1B, Binh Tri Dong B, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam Nam
0777 969 228 Levitt (Mr) - 0909350418 Mee (Ms)
Mọnde - Satọde (elekere asatọ nke ụtụtụ - elekere asaa nke mgbede)